By सपनासंसार October 31, 2010
चकेन्द्र राइ "कैदी"
एउटा नाम दिओस ।
एउटा परिचय दिओस ।
एक पेट खाना दिओस
एक आङ नाना दिओस
एक रात बिताउने छाना दिओस
उनिहरु निर्दोसि छन ।
जन्मियको छ उ.....
सजाय भोग्नु पर्दो रहेछ
त्यही सजाय भोग्न वाध्य छ उ....
सबै बाट घ्रिणित हुँदै
तिरस्कारको एक जुनि
जिउन बिबस छ उ.......
छिछि दुरदुर भएर
फेरी रहेको छ उ.....
आकाश बाट खसे सरी
न उसको ठेगाना
न उसको परिचय
न जन्म दिने आमा/बाबा
को हो उ ?
यस्तै लाग्दो हो........
घरमा लिएर जान्छ्न
कुकुर घर पालुवा जनावर रे
पशुपती र स्वायम्भुको
गौसलामा छाडा छोडेका
कती भाग्यमनी ?
बाँच्न त पाएका छन ।
उ पनि त नेपाली नै हो ।
मात्र नियतीका दासहरु हुन ।
[आज मलाई सडकका ति अनाथ बालबालिकाहरुको बारेमा लेख्न मन लाग्यो । जो नियतीका दास भएका छन् -चकेन्द्र राइ ]। [यो प्रस्तुति कतै पुन प्रकाशित गर्नु परेमा स्रोत खुलाएर वा लेखकको पूर्ण सहमतिमा मात्र प्रकाशित गर्नुहुन अनुरोध छ । -सपनासंसार ]